ZAAD MA LEEDAHAY?!!! W/Q: CALI CABDI COOMAY | Saxil News Network
ZAAD MA LEEDAHAY?!!! W/Q: CALI CABDI COOMAY
Markaan tilifoonka kula hadlaba wuxuu la soo boodayaa walaahi waxaan soo marayaa meel hablaayo iyo xawaare xoog leh ayaan ku socdaa.
Markaan tilifoonka kula hadlaba wuxuu la soo boodayaa” walaahi waxaan soo marayaa meel hablaayo iyo xawaare xoog leh ayaan ku socdaa”. Markaasu isagoo i sasabaya ii raaciyey” maanta inaanWaa maalin arbaca ah, oo goor-sheegtu marayso 2:00-dii galabnimo. Waxaan nin aanu saaxiibo nahay ku sugayaa makhaayada cadaani horteeda bari. Wakhtigan waa wakhti ay suuqa haystaan dadka kuwiisa qaadka ruuga, laakiin maaha wakhti ay joogaan dadka kuwiisa aan qaadka cunin. Guud ahaan markay goor-sheegtu gaadho 2:00 galabnimo ilaa laga soo gaadho 3:00 galabnimo waxa suuqa haysta muqayiliinta. Marka ay gaadho 3:15 ayey soo baxaan kuwii aan balwada lahayni. Anigu waan karahsanaa wakhtigan aan sugayo saaxiibkay, isna wuu og-yahay inaan khaati taaganahay.
ku jabiyey, waan ogahay, laaiin dib u dhici mayso”. Anigoo daawanaya bal dadkan wakhtigan suuqa haysta ileyn hore umaan soo bixi jirin xilligane. Ayey hal-mar waxa hortayda soo istaagtay gabadh wata gaadhi saafir ah. Kursiga hore waxa fadhiya gabadh yar oo aan ilaa afar jir ku qiyaasay da’deeda, kuraasta dambe waxa fadhiya afar wiil oo aan da’dooda ku kala qiyaasay shan jir ilaa sideed jir, oo dhammaantood aan u maleeyey inay dhashay.
Indho qurux badan iyo weji kuma garanayo ah ayey igu soo eegtay. Ana waan la socday ilaa markay soo istaagaysay. Waxay igu tidhi” walaalo meelahan ma lagu iibiyaa ICE-CREAM (iskiriin)”. Waxaan ugu jawaabay “ haa macmacaalahan ayaa iibiya”. Waxay ila muuqatay qurbo-joog. Iyadoo ka fikiraysa inay soo degto, ayey hal-mar ku aragtay horteed nin laba talaajadood oo yar-yar gacmaha ku sita oo iskiriin iibinaya. Ka dib waxay ku tidhi” ICE-CREAM ma haysaa”, ka dib wuu yara istaagay oo kalmadan af-ingiriisiga ah ayuu fahmi waayey. Markaasaan ku idhi” waar ka iibi iskiriinka ayey doonaysaaye”. Gabadhii ayaa ka shakiday oo tidhi” maxaa ku helay”. Markaasaan ku idhi” kalmada af-ingiriisiga ah ayuu fahmi waayey”. Markaasay qososhay. Waxay ku tidhi” waxaad keentaa shan xabbo”.
Wuxuu furay talaajadii wuxuu ka soo saaray shan midh oo isku midab ah. Markaasay ku tidhi” way isku qabsadaane midabka u kala du”. Wuu ku noqday, oo wuu soo beddelay. Caruurtii ayey u kala dhiibtay. In cabaar ah markuu sugayey lacagtii ayey ku tidhi” Zaad ma leedahay”. In muddo ay ayuu aamusay, markaasuu ugu jawaabay “maya”. Fajac iyo yaab badanaa, miskiin yar oo maalintii oo dhan xoogsada wax ka yar labaatan kun oo s/land shilin ah, muxuu Zaad uga baahan yahay. Markaasay tidhi” hadaba xageen kaa siiyaa lacagta”. Ka dib ayaan ku idhi” sariflahan u dir oo ka qaado lacag kaash ah”. Markaasay igu tidhi” mahadsanid walaallo”. Anigaa mudan ayaan ugu af-celiyey.
Markaasaan ku idhi” oo ma qurbahad ka timid.” Waxay iigu war-celisay” haa, laakiin muddo ayaan joogay, ee anigaan suuqa iman”. Markaasaan is dareensiiyey inay waaqaca waxba ka garanyeyn. Saaxiibkay ayaa soo joogsaday, oo dhididsan, markaasuu yidhi” waar kii cali coomay oo aan weligii suuq joogin xilligan ayaan maanta jacdadiyey.” Markaasaan idhi” waar wax badan ayaan ka faa’iday intaan ku sugayey.” Markaasuu yidhi” waan ku aqaano kolay waxaad qorto ayaad baadhaysay, bal anaga uun naga ilaali”. Gaadhigii ayaa nala dhaqaaqay. Sheeko gaar ah ayaa noo bilaabmatay, ee nabadgaliyo.